Archive du 20170705
Hentitra Ravalomanana “Ho avy eny Mahamasina izahay”
Nilaza i Marc Ravalomanana omaly fa am-pilaminana ny hetsika fankalazana ny faha-15 taona niorenan’ny Antoko Tiako I Madagasikara hatao eny Mahamasina ny sabotsy 8 jolay izao.
Rajaonarimampianina Tsy tompon’ny teny farany
Baiko avy any amin’i Hery Rajaonarimampianina mivantana ve ny fisakanana an’i Marc Ravalomanana sy ny antoko TIM tsy hankalaza ny faha-15 taonany eny Mahamasina ny 8 jolay ?
Fisakanana ny hetsiky ny TIM Tsy fanajana zo fototra, hoy ny DFP
Nanambara tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny foiben’ny antoko Akfm etsy Andravoahangy omaly ny avy eo anivon’ny vovonana politika,
Horonam-peo momba an’i Claudine R Niaro tena ny BIANCO
Tsy ny Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption) no namoaka ny horonam-peo mampiseho ny fifamaliana teo amin’ny mpiasa iray eo anivon’ny rafitra sy ny mpanolotsaina manokan’ny filohan’ny
Manome vahana ny fakana harem-pirenena Tsy ekena, hoy ny tanora Silamo
Nanao fanambarana tetsy Andravoahangy omaly ny solontenan-dry zareo tanora avy eo anivon’ny Cercle de reflexion inter-musulman fa efa vonoina mivantana amin’izao fotoana izao ny zaza Malagasy.
Asan-jiolahy Miaramilan’ny prezidansa nidoboka eny Antanimora
Nisehoana gidragidra ara-pitsarana indray teny amin'ny tribonaly Anosy omaly, noho ny tsy fahafalian’ny lehibena mpitandro ny filaminana tamin’ny didy navoakan’ny fitsarana. Miaramila 2, zandary 1 ary polisy 1,
Kitra Asaramanitra TIM Ankazondandy Lasan’Anosy ny Amboaran’i Dada
Tanteraka ny sabotsy nialohan’ny fetim-pirenena Malagasy 2017 teo ny lalao baolina kitra fankalazana ny fetin’ny ray sy ny fetin’ny
Toran-kovitra sahady !
Adin’ny kanosa sisa ampiasain’ny fanjakana HVM hoenti-mamingana ny mpifanandrina politika aminy amin’ny fifidianana ho avy.
Raharaha halatra omby 865 Nampirimina ny dosie ?
Very nandritra ny asan-dahalo ny 12 mey 2016 tao amin’ny toerana antsoina hoe Angodogodo,
Hanamarika ny faherintaona nandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny serasera, izay toherin’ny mpanao gazety ny Hetsika ho falalahana maneho hevitra (MLE) ny zoma 7 jolay izao.